Umalusi Omncane waseJalimane: Ingabe Zikhona Lezi Zinja Eziyisayizi Ephaketheni? - Izinhlobo
Umalusi waseJalimane unesibindi, ukhaliphile, uhlobo oluqotho nolusebenzayo . Kepha, kuthiwani ngoMalusi omncane waseJalimane?
UMini German Shepherd uzoma kuphela kuma-intshi ayi-15 kuye kwangama-20 bese enesisindo esingamakhilogremu angama-50; uma kuqhathaniswa namasentimitha angama-25 namakhilogremu angama-75 osayizi ogcwele waseGerman Shepherd ... hhayi ubukhulu bephakethe, kepha akhona!
Lokhu kuzala kwezemidlalo nobuhle obuncane buzoheha inja-abazali abaningi kubo.
Yize kungeyona inja emsulwa, lolu hlobo lokuphambuka oluncane yi-German Shepherd Mix enePoodle noma iBorder Collie, edala inhlanganisela yomndeni nesilwane esisebenzayo.
Ake sikuqondise kulolu hlobo lobumnene, ubuntu, ukubukeka nokunakekelwa kumhlahlandlela womnikazi wethu.
Itafula Elincane Lesifinyezo Sabelusi BaseJalimane
Usayizi 15 kuye ku-20 ″
Isisindo Kufika kuma-50 lbs
Isikhathi sokuphila Kuze kube yiminyaka engu-15
Inhloso Ukusebenza / Umngane
Ifanele i- Abantu abanamandla, nemindeni kunoma yisiphi isimo sokuphila
Ukuhluka Kwemibala I-Tan enesihlalo esimnyama, esimhlophe, esimnyama, isable noma emnyama ngisho ebomvu nebomvu.
Isimo Ukwethembeka, ukuvikela, ukuhlakanipha, ukusubatha nokudlala
Amanye Amagama Umalusi waseJalimane x Border Collie, Umalusi waseJalimane x Poodle noM Mini German Shepherd
Umalusi omncane waseJalimane - Ukubuka konke ngokuzalwa
Umdlwane omncane waseJalimane uMalusi
I-Mini German Shepherd Temperament
Ungawunakekela Kanjani Umalusi Omncane waseJalimane
Ukuqeqesha Umalusi Omncane waseJalimane
Ukubukeka koMalusi Omncane waseJalimane
Uma kukhulunywa nge-Miniature German Shepherd, kunokuningi okuhlangabeza iso. Eqinisweni, abantu abaningi abaqapheli ukuthi lolu hlobo akuyona inja ehlanzekile.
Umbono oyiphutha ovamile nge-Mini German Shepherd ngukuthi bangumalusi omncane waseJalimane ongenacala. Noma kunjalo, lokhu kwaziwa ngokuthi yi-dwarfism futhi akuvamile kakhulu.
I-purebred German Shepherd ivame ukuhlanganiswa nohlobo oluncane njengeMiniature Poodle noma iBorder Collie ukwenza iMini GSD.
IBorder Collie neMiniature Poodle yizinhlobo ezimbili ezaziwa ngobuhlakani bazo, njengoba kunjalo nangeGerman Shepherd. Kodwa-ke, lezi zinhlobo zincane, zohlobo oluphakathi nendawo ngakho-ke zisiza ukudala ukuhlangana okuncane, okumnandi kwe-German Shepherd.
Lolu hlobo lwenzelwe ukuba nazo zonke izici ezithandekayo zoMalusi waseJalimane kepha ngosayizi ohlangene. Zifanele zombili izilwane ezifuywayo zasekhaya kanye nezinja ezisebenzayo.
Alukho usuku oluqondile lapho uMalusi omncane waseJalimane avela khona e-US.
Njengoba lolu hlobo akuyona inja ehlanzekile ehlanzekile, wonke udoti uzohluka kakhulu. Isibonelo, udoti we-German Shepherd x Border Collies uzohluka ngokubukeka kwe-German Shepherd x Miniature Poodles.
Ngedamu le-Shepherd (isb. Umama) udoti ngamunye uzoqukatha cishe ama-6 kuya kwayi-8 ama-Miniature German Shepherd Puppies ngokwesilinganiso; ngentengo ejwayelekile ye- $ 1000 USD.
3 izinyanga 6 12
Izinyanga eziyi-6 13 26
Izinyanga eziyi-9 amashumi amabili 39
Izinyanga eziyi-12 26 amashumi amahlanu
Ukwethembeka, ukuvikela, ukuhlakanipha, ukusubatha nokudlala; izichasiso ezinhlanu ezichaza kahle lolu hlobo lomalusi olulingana ephaketheni.
Umalusi omncane waseJalimane uzokuthanda kakhulu njengoba ubavumela. Bazokujabulela ukukunikeza abaningi ikhotha njengobuso nezinyawo zakho isifiso.
Zingaba zincane kepha zingaba yizinja ezinkulu zokuqapha ngenxa yemvelo yabo yokuvikela . Ngakho-ke, ukuxhumana nabantu okuyikho kuyadingeka.
Ukuhlalisana nabantu kubaluleke kakhulu kulolu hlobo lwe-mini futhi kufanele luqale zisencane (empeleni ukuzihlanganisa nabantu kusuka emasontweni ayisikhombisa ubudala). Qiniseka ukuthi babaqondise ekusebenzisaneni okufanele nabantu ngakho abesabi futhi bavikele.
Njengoba bebancane, bagcwele amandla futhi indlela abadlala ngayo ibenza babe yilungu lomndeni eliphelele uma unezingane ezidinga ukubungazwa.
Njengoba lolu luhlobo oluncane kodwa olunamandla, lulungele indlela yokuphila lapho kunesikhathi esilinganiselwe sokudlala noma isikhathi sokuvivinya umzimba. Benza umlingani ohamba phambili wokuhamba izintaba, osebenza naye kanye nomngane we-cuddle.
Noma kunjalo, yize benamandla amaningi, abadingi igceke elikhulu emuva njengabazali babo baseGerman Shepherd.
Umalusi omncane waseJalimane ulungele izindawo ezahlukahlukene:
Indlu yokuhlala encane
Impilo ematasa yedolobha
Usayizi wazo ohlangene futhi ophathekayo wenza kube lula ekhaya kune-GSD ephelele. Ngokufingqa, le nja inobuhlakani obunobuhlakani nothando.
UMini German Shepherd ungumlingani oqotho ofanele umuntu noma umndeni.
Ukunakekela uMalusi wakho Omncane nakanjani akudinisi njengokunakekela amanye amaMixes kaMalusi waseJalimane .
Mancane futhi ahambisanayo futhi ngakho-ke izidingo zawo zokudla nokuvivinya umzimba aziphezulu kangako.
Uhlobo oluzalwe ngosayizi omncane waseGerman Shepherd, ludinga cishe ama-calories angama-30 ngesisindo somzimba ngosuku.
Lokhu kusho ukuthi ngokwesilinganiso, lolu hlobo luzodinga ama-calories ayi-1,500 ngosuku. Yize lokhu kungashintsha ekuphenduleni ezintweni eziningi ezinjengeminyaka yabo, ukukhula ngokocansi, usayizi, izinga lomsebenzi nesizini.
Ngakho-ke lolu hlobo luzodinga izinkomishi ezintathu ze-kibble eyomile ngosuku. Kufanele uzame ukuhlukanisa lokhu okuphakelayo kube yizinsizakalo eziningi zansuku zonke, zama ukondla inja yakho kanye ekuseni nasebusuku.
Njengabanye abelusi , lolu hlobo lungahle lube ne-hypothyroidism (isb. umsebenzi omncane we-thyroid gland) ngakho-ke qiniseka ukuthi uqinisekisa ukuthi i-kibble yabo iqiniswe ngamavithamini namaminerali anele.
Lezi zidlwane zingaba zincane kepha ziyadlala kakhulu futhi zithanda umsebenzi. Kuyasiza ukubanikeza nge ukukhuthazwa kwengqondo abakudingayo futhi .
Zama ukuthatha inja yakho uhambe okungenani kanye ngosuku bese uqeda kusihlwa ngesinye isikhathi sokudlala egcekeni lakho elingemuva.
Umdlalo omuhle wabelusi ngumdlalo wakudala wokulanda:
Thenga ibhola enobungane
Khombisa inja yakho lelibhola
Ithi 'Landa' ngenkathi uphonsa ibhola
Linda, njengoba inja yakho ibuyisela ibhola kuwe
Phinda kusuka kusinyathelo 2!
Lokhu kungathatha isikhashana kepha i-GSD yakho kufanele ibambe ngokushesha. Noma ekuqaleni kungenzeka babe nesidlele kancane futhi benqabe ukuyeka ibhola labo abalithandayo elisha abalitholile!
Ungazama ukubanikeza ukwelashwa okunempilo lapho bedlala ngempumelelo lo mdlalo ezikhathini ezimbalwa zokuqala.
Uma ukuhamba kuhamba kancane, zama ukugijima noma ngisho nokuhamba ngebhayisikili eduze kwenja yakho. Bayokwazisa noma yisiphi isitayela sokuzivocavoca abangasithola.
Kufanele uhlose cishe ihora elilodwa lokuzivocavoca ngosuku. Lokhu kuzokwanela ukugcina wena nomfundi wakho nisesimweni esifanelekile, nisebenza kahle futhi nisebenza.
Unenhlanhla yokuthi le Mini GSD ihlakaniphe kakhulu ngakho-ke umdlwane wakho kufanele ufunde imiyalo emisha ngokushesha.
Njengabazali babo , benza abafundi abahle kakhulu. Eqinisweni, umdlwane wakho uzofunda lezo zinto eziyisisekelo; hlala, hlala, ayikho imiyalo ngesikhathi. Ukuqeqeshwa kokulalela nokuqeqeshwa kwasendlini kufanele kube lula futhi kungathathi isikhathi nakancane, futhi futhi kubenze isilwane somndeni esiphelele.
Ukhiye wokuqeqesha umdlwane wakho ukugcina ukuqeqeshwa kulula futhi kungaguquguquki. Ngenkathi kumnandi, yiba nesineke futhi ukhuthaze isimilo esihle ngokusebenzisa ukuqeqeshwa okuhle kokuqinisa .
Kubalulekile ukuthi umboze zonke izisekelo uma kukhulunywa ngokuqeqeshwa. Ngakho-ke qiniseka ukuthi ufaka ukugqugquzelwa kwengqondo nokuzihlanganisa nabantu:
Ukuvuselelwa kwengqondo kubalulekile njengoba kunciphisa noma yikuphi ukuziphatha okungafuneki ukuthi kuvele. Okufana nokudinwa okungaholela ekuhlafunweni okungafuneki nokukhonkotha kunoma iyiphi injanyana.
Qala ukuhlangana nabantu usemncane futhi uqiniseke ukuthi wethula i-pup yakho ekushintsheni ezindaweni, izinto ezintsha kanye nohla lwabantu.
Lapho sebekhule ngokwanele, zama amakilasi e-puppy nokunakekelwa kwezinsuku zezinja ukuze babe nobungane namanye ama-canine.
Ukuba uhlobo oluhlakaniphile, ubuchopho babo budinga ukugcinwa busebenza. Unganikeza ukukhuthazwa ngokuzivocavoca umzimba, ukuqeqesha, ukubopha kanye nemidlalo.
Ngeshwa, ngisho izinhlobo zezinja eziqanjiwe zingathola ezinye zezinkinga zezempilo kubazali bazo abahlanzekile. Endabeni yoMalusi waseJalimane ongenacala, siyazi ukuthi abaningi banezinkinga zempilo, kuze kufike lapho kwazalwa uhlobo olusha ukuzala ezinye zezinkinga. Sibhale ngezansi ezinye zezinto eziyinkinga enkulu yezempilo noMalusi Omncane waseJalimane:
ICanine Hip Dysplasia
Umalusi waseJalimane uthinteka ngofuzo kuHip Dysplasia okusho ukuthi nalokhu kungadluliselwa kuMalusi wakho omncane waseJalimane. I-Hip Dysplasia yenzeka ngenxa yokungahambi kahle kwamalunga ezinqeni. Lokhu kungaholela ekukhubazekeni nasekugcineni ukwelashwa ngokuhlinzwa.
I-Physiotherapy inganikezwa ngudokotela wezilwane wakho ukuze wehlise noma yibuphi ubuhlungu obuhambisana nalesi sifo. Ngeshwa, izinkinga eziqhubekayo zingaholela ekuhlinzweni.
Ukuqhakaza ( Ukwehla kwesisu )
Ngeshwa umalusi wakho omncane waseJalimane naye angahlushwa ukuqunjelwa. Ukuqunjelwa kwenzeka lapho isisu senja yakho sigcwala kusuka ekuphefumuleni okufaka ingcindezi kwezinye izitho okungaholela ebuhlungwini obukhulu. Lesi sifo siyingozi njengoba ingcindezi ingaholela kwezinye izinkinga zezempilo ezinjengezinkinga zenhliziyo nezokuphefumula.
Umalusi waseJalimane okhule ngokugcwele uzoba ngamakhilogremu angama-25 amakhulu kunesincane.
Kunesizathu sokuthi lolu hlobo lubizwa ngokuthi yi-Miniature German Shepherd. Zibukeka zifana ncamashi nazo ... yize zincane kakhulu. Umalusi waseJalimane ozohlala osayizi ophakathi naphakade.
Imvamisa zinoboya besikhumba ngesihlalo esimnyama. Yize uboya babo kwesinye isikhathi bungaba mnyama, sable, mhlophe futhi nokuhlanganiswa komnyama ngokubomvu noma ngesiliva. Ijazi labo elihle elithandekayo lingenye yezesekeli abazithandayo ezinyangeni ezipholile njengoba libanikeza leyo mfudumalo eyengeziwe.
Amehlo abo ansundu nezindlebe zabo ziphakanyiselwe phezulu kwamakhanda abo (yize uma kuyimidlwane bavame ukwehla).
Ukwakhiwa kwalolu hlobo nakanjani kwezemidlalo futhi kunesibindi. Zima kuphela ngamasentimitha angama-15 kuye kwangama-20 futhi zinesisindo esifinyelela kumakhilogremu angama-50; kuqhathaniswa nomzali wabo waseGerman Shepherd ongaba nesisindo esingaphezu kwamakhilogremu angama-70.
Into eyodwa okufanele uyikhumbule ukuthi iMini German Shepherd akuyona uhlobo olwaziwayo ngakho-ke ukwehluka phakathi kukadoti (isb. Usayizi nokubukeka) kungaba kukhulu.
Ukuxubha umdlwane wakho kufanele kuqale ngokushesha okukhulu ukuze bajwayele lo mkhuba.
Izidingo zokuzilungisa zoMalusi Omncane waseJalimane zifana kakhulu nezikaMalusi waseJalimane ongenacala.
Ukuxubha uMalusi omncane kuyisidingo, ngenxa yejazi labo eliphindwe kabili. Uma ungakwenzi ungavele nje ungqimba olutholakele lukakhaphethi ngezilokotho zomdlwane wakho.
Kufanele ushaye ingubo ye-Mini GSD yakho okungenani kabili ngeviki, futhi lokhu kungakhuphuka phakathi nezinyanga ezifudumele lapho ingane yakho isusa leyo jazi elengeziwe.
Ukuqhuma nakho kuyinto okufanele uyikhumbule. Lokhu kwenzeka kabili ngonyaka ukuphendula ushintsho lwesizini. Ngakho-ke ungethuki lapho ubona inja yakho ilahlekelwa YININGI lezinwele ngalesi sikhathi.
Lolu hlobo luyisiphambano, futhi akusilo i-purebred German Shepherd, ngakho-ke lezi zidingo zingahluka maqondana nokwehluka koboya bazo kusuka kuBorder Collie noma iMiniature Poodle.
Uhlobo oluphelele lwanoma yimuphi umthandi waseJalimane uMalusi ongahlali esikhaleni noma emzameni woMalusi ojwayelekile waseJalimane.
Lolu hlobo lungaba lincane kepha ubuntu babo buhlala bunesibindi njengohlobo lwabazali babo.
Uthembekile, uhlakaniphile, uyadlala futhi unesibindi; zonke izici nobuhle boMalusi weqiniso kwenza lolu hlobo lube inja ephelele yanoma imuphi umndeni noma umuntu. Ziphelele ngisho ezinganeni ngenxa yesimo sazo sokudlala.
Ukuqeqeshwa, ukondliwa kanye nokuvivinya umzimba kuhlangatshezwa kalula ngakho-ke okufaka isandla kulokhu kuzala ukuthandwa okukhulayo.
Manje, ucabangani? Ngabe lo Malusi waseJalimane olingana nephakethe ulungele wena? Sazise kumazwana angezansi.
Ngabe i-German Shepherd Chow ixuba inja eqaphe kakhulu?
izinwele ze-chihuahua ezinwele ezinde izithombe
ukukhomba inja izala inja exubile
ukukhotha izinja ngezidladla nokuhefuzela
amagama ezinja zesilisa zamalebhu eshokoledi